Indlu ye-Oaks emithathu
Le ndlu ibekwe ngokugqibeleleyo kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ibekwe kanye kuMlambo iSaint John. I-cottage inendawo enkulu ejikelezileyo kunye nempuma esezantsi kunye nedesika ejonge emazantsi apho unokonwabela ilanga kwaye ubukele abakhweli abahlala besonwabela umlambo. Sibonelele ngefenitshala ekhululekile yepatio kunye nomngxuma womlilo wangaphandle kunye ne-Weber barbecue ukongeza kwindawo yakho yokuhlala ekhululekile. Yonwabela i-200 yeenyawo elunxwemeni lwabucala apho kukho ukuqubha kunye nokuhamba ngesikhephe ngexesha lokuhamba ngesikhephe.
Ikhitshi igcwele kakuhle kubandakanya iziqholo ezininzi kunye neoyile / iviniga. I-cottage yonke ivulekile kwimibono yomlambo
Le ndlu ikwimizuzu eli-10 ukusuka kwilali yaseGrandBay-Westfield apho kukho ivenkile enkulu yegrosari, indawo yokubhaka, indawo yokuthengisa utywala, iivenkile zokutyela, iicawe kunye nesikhitshane sokumisa ukufikelela kwiPeninsula yaseKingston. Kukho iintlobo ngeentlobo zeendawo zokutyela ezikwidolophu yaseSaint John ekumgama omalunga nemizuzu engama-20. Ivenkile yokutya kwaselwandle nayo ifumaneka ngaphakathi kwemizuzu eyi-15 ye-cottage
Unxweme loluntu oluhle noluzolileyo lukwimizuzu emi-5 kude efumaneka ngemoto ukuvumela iindwendwe ukuba zithathe yonke impahla yazo ngosuku olukhulu lolwandle. Kukho izitulo zaselwandle, iitawuli kunye ne-cooler oyisebenzisayo.
Iindwendwe ezinomdla zingaqhakamshelana nam nanini na ngefowuni/i-imeyile okanye ngetekisi